Made By Google Event ကို ဘယ်လို ကြည့်ကြမလဲ
9 Oct 2018 . 4:24 PM
Google က Made By Google ဆိုတဲ့ Product သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို New York မြို့မှာ ကျင်းပသွားတော့မှာပါ။ ဒီပွဲကိုတော့ Google က YouTube မှာ Livestream ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စောင့်ကြည့်နိုင်မှာပါ။
Made By Google Tweet
Google Event မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ ၃ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့ မိတ်ဆက်မယ့် ဖုန်းအသစ်တွေ၊ Android Feature အသစ်တွေနဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတွေပါ။ Product အသစ်တွေထဲက စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံးကတော့ Pixel3ဖုန်းတွေပါ။ Google က ပထမဦးဆုံး Pixel ဖုန်းကတည်းက အရွယ် ၂ မျိုး ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ၃ မျိုးအထိ ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အဲ့တာကလည်း Google ရဲ့ နောက်ဆုံးတင်ထားလိုက်တဲ့ Twitter က Tweet တစ်ခုကြောင့်ပါ။
Some things just add up.
Stay tuned. https://t.co/dNxJeGmaeH pic.twitter.com/SdVdiX32Zw
— Google India (@GoogleIndia) October 7, 2018
3 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို သုံးခါပြထားတာက Pixel3Device သုံးခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။
Hint for the Camera
Google က Instagram အပါအဝင် Social Media တွေမှာလည်း မနားတမ်း Teaser ဓာတ်ပုံတွေတင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီပုံတွေမှာတော့ Pixe3ဖုန်း တွေရဲ့ Camera နဲ့ပတ်သက်ပြီး Hint ပေးထားသလို Size တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း Hint နှစ်ခုပေးထားပါတယ်။
Hint for Small Phone
ဖုန်းအကြီးဆုံးက ဘယ်လောက်ကြီးနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ဖုန်းအသေးဆုံးကရော ဘယ်လောက်သေးတာက အဆင်ပြေမလဲဆိုတာတွေကို စဉ်းစားစရာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။
Hint for the Big Phone
နောက်ထပ် သတင်းပေါက်ထားတာတွေအရတော့ Google က Pixel Slate ဆိုပြီး Android Tablet အသစ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာပါ။ သတင်းပေါက်ထားတွေအားလုံး ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ ဒီနေ့ည ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်မှာ YouTube ကနေ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Made By Google Event ကို ဘယျလို ကွညျ့ကွမလဲ
Google က Made By Google ဆိုတဲ့ Product သဈမိတျဆကျပှဲကို New York မွို့မှာ ကငျြးပသှားတော့မှာပါ။ ဒီပှဲကိုတော့ Google က YouTube မှာ Livestream ပွုလုပျပေးသှားမှာဖွဈတာကွောငျ့ သငျကိုယျတိုငျလညျး စောငျ့ကွညျ့နိုငျမှာပါ။
Google Event မှာ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာ ၃ ခကျြရှိပါတယျ။ အဲ့တာတှကေတော့ မိတျဆကျမယျ့ ဖုနျးအသဈတှေ၊ Android Feature အသဈတှနေဲ့ အနာဂတျမှာ ဘာတှဖွေဈလာနိုငျမလဲဆိုတာတှပေါ။ Product အသဈတှထေဲက စိတျဝငျစားဖို့ အကောငျးဆုံးကတော့ Pixel3ဖုနျးတှပေါ။ Google က ပထမဦးဆုံး Pixel ဖုနျးကတညျးက အရှယျ ၂ မြိုး ထုတျခဲ့ပမေယျ့ အခုတဈခေါကျမှာတော့ ၃ မြိုးအထိ ဖွဈလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။ အဲ့တာကလညျး Google ရဲ့ နောကျဆုံးတငျထားလိုကျတဲ့ Twitter က Tweet တဈခုကွောငျ့ပါ။
3 ဆိုတဲ့ နံပါတျကို သုံးခါပွထားတာက Pixel3Device သုံးခုဖွဈလာမယျဆိုတာ သခြောနပေါပွီ။
Google က Instagram အပါအဝငျ Social Media တှမှောလညျး မနားတမျး Teaser ဓာတျပုံတှတေငျနခေဲ့ပါသေးတယျ။ အဲ့ဒီပုံတှမှောတော့ Pixe3ဖုနျး တှရေဲ့ Camera နဲ့ပတျသကျပွီး Hint ပေးထားသလို Size တှနေဲ့ ပတျသကျလို့လညျး Hint နှဈခုပေးထားပါတယျ။
ဖုနျးအကွီးဆုံးက ဘယျလောကျကွီးနိုငျမလဲဆိုတာနဲ့ ဖုနျးအသေးဆုံးကရော ဘယျလောကျသေးတာက အဆငျပွမေလဲဆိုတာတှကေို စဉျးစားစရာဖွဈအောငျ လုပျပေးထားတာပါ။
နောကျထပျ သတငျးပေါကျထားတာတှအေရတော့ Google က Pixel Slate ဆိုပွီး Android Tablet အသဈကိုလညျး မိတျဆကျပေးသှားမယျဆိုတာပါ။ သတငျးပေါကျထားတှအေားလုံး ဟုတျမဟုတျဆိုတာကိုတော့ ဒီနညေ့ ၉ နာရီ ၁၀ မိနဈမှာ YouTube ကနေ စောငျ့ကွညျ့နိုငျပါတယျ။